Chii chinonzi EAT muSEO uye maitiro ekuiwedzera? | ECommerce nhau
Chii chinonzi EAT muSEO uye maitiro ekuiwedzera?
Icho chinhu chinobva kwaunogona kuwana zviwanikwa zvakawanda zvekuvandudza kwechitoro chako chepamhepo kana kutengesa. Kubva pane imwe nzira inozivikanwa nekuva nehunyanzvi uye kupa mhinduro zhinji mukutungamira kwebhizinesi rako mutsetse kupfuura iwe zvaungave nazvo kubva pakutanga. Kunyanya kana iwe uri mumwe wevanhu vanofunga kuti iwe unofanirwa kuve pamwe nemaitiro matsva mukushambadzira kwedhijitari, senge izvi ndizvo zvazviri.
Zvakanaka, uye kuti upinde mune ino nhaurwa yenyaya, EAT ndicho chidimbu chinomiririra zvitatu zvezvakakosha zvekugadzirisa SEO kugadzirisa: Chiitiko, Chiremera uye Chivimbo. Asi… chii chine chekuita neKuvimba? Tsananguro iri nyore: semafungiro mazhinji muKushambadzira Kwepamhepo, aya mazita anobva mumazwi echiChirungu "Hunyanzvi, Chiremera, Kuvimbika".
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora kubva panguva ino zvichienda ndeche icho chine chekuita nemhando yebhizimusi rako. Kubva pane ino maonero, hapana mubvunzo kuti pakupedzisira Iwe unozoda yakakwira kana yakaderera nhanho dzechiitiko mune ruzivo iwe rwaunopa. Semuenzaniso, pane mawebhusaiti eongororo yemakambani ekuzorora kana ekudzidzisa, chero zvemukati zvinogona kusarudzwa sezvakagadzirwa ne "nyanzvi" (kana zvirinani hazvizorangwa maererano neyakaenzana neruzivo), nekuti nzvimbo idzi dzinoda maonero uye "zviitiko zvezuva nezuva" izvo hazvifanirwe kubva kune mumwe munhu ane ruzivo rwakakura rwechinhu chiri kutaurwa
1 Idya muSEO: ruzivo
2 Nzvimbo yewebhusaiti
3 Nzvimbo yewebhusaiti
4 Ita zvese zvaunogona kuratidza EAT yako.
5 Wongorora zviri mukati
Idya muSEO: ruzivo
Ichokwadi ndechekuti haisi yekureva chero nyanzvi, asi zvirimo pachazvo zvinoratidza kana zvakagadzirwa nemunhu anoziva uye anonzwisisa zvavanonyora. Kuti peji rimiswe zvakanaka, zvirimo zvinofanirwa kunakidza kune vashanyi, pamwe neyekutanga uye ichokwadi. Ndokusaka Google ichizotarisa musiki wezviri mukati anoteedzera iyi mirairo kuve nyanzvi panyaya iyi.
Izvo zvakasikwa zvinongedzo zvaunazvo: nekuti kana iwe uri chiremera, chinhu chine musoro ndechekuti mamwe mawebhusaiti akavimbika mune yako chikamu anobatanidza peji rako sereferenzi. Ziva kuti tataura "zvakasikwa". Kana zvemukati zvako zvakanaka uye kambani yako yaita basa rakanaka reSEO Peji, zvinongedzo zvichauya zvega.
Brand Mazwi Akakosha: Pane vanhu vari kutotsvaga rako bhizinesi zita paGoogle? Icho chiratidzo chakanaka kuGoogle kuti uri kuita zvakanaka.
Masocial network: Kana zvemukati zvako zvakagovaniswa zvakare chiratidzo chekuti unoonekwa sereferenzi.
Sezvauri kuona, zvakare, isu tiri kutaura pamusoro pemafungiro ane chekuita neyako chiratidzo chemufananidzo basa mune zvese.
Iyo zvakare yakajeka pfungwa. Ndiani anozotanga kuratidzwa naGoogle? Kune webhusaiti iyo inogona kuvimbwa kana iyo yatisina mareferenzi kwairi? Chinokosha apa ndechekuona maitiro atinodzidzisa Google kuti isu "takavimbika."
Tinokupa mamwe mazano:
Ruzivo rwekubata: ratidza zvakajeka kuti vangapinda sei newe. Kana bhizinesi rako riine hofisi, zvakanaka zvakare kuti iwe ubatanidze chimiro chako nekero.
Peji rakachengeteka kana HTTPS: Kunyangwe izvi zvisisiri kukosha kuGoogle, asi kuti vatengi vako vangangove nerunyararo rwepfungwa kuti webhusaiti yako yakachengeteka uye kuti ruzivo rwavo rwakachengetedzwa.
Mapeji emutemo: ehe, izvo zvisina kana munhu akamboteerera uye izvo makambani mazhinji anoteedzera. Iva nemapeji ako akanyatsogadziriswa uye ari nyore kuwana. Kana iwe ukatengesa zvigadzirwa, zvakafanana zvinoshanda kune yako kudzoka mutemo.
Ehezve, chinhu ichi chinoreva zvimwe zvehunyanzvi zvinhu zveiyo portal, senge kuve nesitifiketi cheSSSL pane yedu portal, nyore uye fluid kufamba (pasina kubiridzira), kukurumidza kurodha nguva, nezvimwe.
Iyo EAT metric inoiswa kune yega yega uye kune ese masuo, asi ine kukosha kwakakosha munzvimbo dzeYMYL, zvichipiwa hunhu uye kukosha kwakakosha kwezvirimo zvakafukidzwa mune aya maratidziro. Kana yako portal yanga iri murusununguko kudonha kwemwedzi mishoma uye iwe usingazive nei, iwe unofanirwa kufunga kushandisa matanho erudzi urwu kudzikisira mhedzisiro yeichi chiitiko.
Mugwaro reGoogle revatarisiri ivo vanoratidza kuti ndezvipi zvinhu zvakakosha kuyera mhando yepeji, ndeaya:
Chikamu chepamusoro cheEAT, vanochitsanangura se "hunhu hunokosha hwakakosha".
Huwandu hwakanaka hwehunhu hwemukati. Ine zvinyorwa zvinotsanangudza uye zita rakanaka. Izvi zvinotora nguva, simba, ruzivo, uye hunyanzvi.
Ruzivo rwakakwana kubva kune saiti kana ruzivo nezve ndiani anokoshesa zvirimo zvemukati.
Mukurumbira wakanaka wesaiti uye mukurumbira wemupepeti.
Kune rimwe divi, iyo Google inoona seyakaipa peji peji imwe ine yakaderera EAT nhanho, yakaderera mhando zvemukati, zvishoma huwandu hwezvinyorwa nechinangwa cheiyo peji. Kunyangwe kana zita racho rakawedzeredzwa kana kunakidza. Zvakare, kuti ine zviziviso zvinovhiringidza kubva kune huru yezvinyorwa. Uye kuti saiti ine mukurumbira wakashata.
Natsiridza mukurumbira wako wepamhepo uye gamuchira ongororo kubva kune echitatu-bato saiti Rangarira kuti zvinotaurwa nevanhu nezve bhizinesi rako zvine basa zvakanyanya.
Usazadza saiti yako nezviziviso.
Ratidza mhando yako nevanyori vayo, kuti ugowana chivimbo.
Taura zvinyorwa zvinovimbika muzvinyorwa uye ugamuchire zvinongedzo semanyuko emamwe magwaro.
Ita shuwa kuti yako YMYL zvemukati zvinotsigirwa nehunyanzvi hwesainzi.
Tora kutaurwa kubva kunzvimbo dzemasimba uye mumaforamu.
Kazhinji, iwe unofanirwa kuve wakavimbika.
Ita zvese zvaunogona kuratidza EAT yako.
Kubva pane ino maonero zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hazvishamise kuti Google inovimba zvakanyanya pamapeji anonyatso kufumura data ravo, senge muridzi wedomeini, nzvimbo yekambani, mazita evapepeti, nezvimwe ... Izvo semuenzaniso, yemapeji anoramba achishandisa isingazivikanwe "Whois" kana izvo zvisingaburitse chero data.
Kuziva kuti ndiani arikunyora, ndiani muridzi wewebhu peji uye kunyangwe iyo kero yataurwa peji kana kambani, chinhu chinopa muverengi chivimbo uye chinodiwa neGoogle.
Ndichiri kune rimwe divi, chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo chinokanganisa nyaya iyi thermometer yakanaka kusimudzira webhusaiti yechitoro chedu kana bhizinesi repamhepo. Saka kuti nenzira iyi, inopa akateedzana hunhu hwatichazotaura nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi:
Hunhu hwekutanga hwemhando yepamusoro peji ndeye chaiyo yakakwira EAT nhanho. Iyo rondedzero inosanganisira sekuwedzera-ons:
• Chiitiko chepamusoro chechiitiko, masimba uye kuvimbika, kusanganisira iyo EAT yemupepeti uye / kana munyori wezvinyorwa neruzivo rwuri mumapeji.
• Iva nenhamba yakati wandei yezvakakwira zvemhando yepamusoro zvemukati.
• Iva neruzivo rwakakwana pamusoro pekuti ndiani anoona nezvesaiti uye / kana ruzivo rwakakwana nezvekutengeswa kwechigadzirwa kana sevhisi. Kana iyo saiti yekutengesa online, inofanirwa kujekesa pane peji rekutanga mashandisiro emari anoitwa.
Budirira neruzivo rwakajeka uye rwechokwadi, pamusoro pezvakakosha zvemukati uye zvine hushamwari kufamba, iro zita rakanaka resaiti.
Zvese zvinokurukurwa zvinogona kukupa iwe hwaro hwekuti chii EAT uye kuti ungashandise sei ruzivo urwu kunatsiridza masosi ako. Kuve nehunhu hwakanaka paGoogle chinhu chakakosha kana zvasvika pakuisa yakakwira mumhedzisiro yekutsvaga. Tinovimba izvi zvinokubatsira kutanga uye kutanga kugadzira yako webhusaiti kupa hunyanzvi, masimba, uye kuvimba mune zvako zvese zvemukati.
Wongorora zviri mukati
Kuti tiongorore zvemukati medu zvewebhu tinofanirwa kupindura yakateedzana mibvunzo ichatibatsira kuziva kana ruzivo rwatinopa rwuchienderana nezvinodiwa zvechitsva ichi cheGoogle algorithm. Mibvunzo mikuru ndeiyi:
Izvo zvirimo zvinopa ruzivo rwekutanga, mishumo, tsvagurudzo kana ongororo?
Izvo zvirimo zvinopa yakadzama, izere, kana izere tsananguro yemusoro wenyaya?
Izvo zvirimo zvinounza nzwisiso ongororo kana ruzivo runonakidza rwunopfuura pachena?
Kana zvirimo zvakavakirwa pane zvimwe zvinyorwa, unodzivirira kungoteedzera kana kunyorazve izvo zviwanikwa uye pachinzvimbo uchipa chakakura chekuwedzera kukosha uye kutanga?
Musoro uye / kana zita reiyo peji rinopa pfupiso inotsanangura uye inobatsira yezviri mukati?
Musoro uye / kana zita reiyo peji rinodzivirira kuwedzeredza kana kuvhundutsa muchimiro?
Urwu ndirwo rudzi rwe peji iwe raunoda kumaka bookmark, kugovana neshamwari, kana kukurudzira?
Iwe ungatarisira here kuona izvi zvemukati mumagazini yekudhinda, encyclopedia, kana bhuku raunongedzera?
Ipo pakupedzisira, inofanirwa kujekeswa kuti iyo EAT muSEO ipfungwa ingangodaro isingazive zvinoreva iyi pfungwa yechizvarwa chinotevera, asi inogona kubatsira zvakanyanya mukuvandudza kwechitoro chako chepamhepo kana commerce.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Chii chinonzi EAT muSEO uye maitiro ekuiwedzera?
6 matipi ekuvandudza sevhisi yechitoro chako chepamhepo
Nei uchibheja pane ekuunganidza poindi network kana iwe uine eCommerce?